यस वर्षकाे एसइई परिक्षा गर्ने मिति ताेकियाे, यस्ताे छ तयारी ! – List Khabar
Home / समाचार / यस वर्षकाे एसइई परिक्षा गर्ने मिति ताेकियाे, यस्ताे छ तयारी !
यस वर्षकाे एसइई परिक्षा गर्ने मिति ताेकियाे, यस्ताे छ तयारी !
admin February 9, 2022 समाचार Leaveacomment 40 Views
माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) वैशाख ९ गतेदेखि हुने भएको छ । बुधबार बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले एसईई वैशाख ९ गतेदेखि २० गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । परीक्षाको समयतालिका भने बिहीबारको गोरखापत्र र बोर्डको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय चुनावको मितिसँग एसईईको तालिका नजुधोस् भनेर निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मात्रै एसईईको समयतालिका निर्धारण गरिएको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताए । उनले भने ‘हामीले वैशाखभित्र गर्ने भनेकै थियौं । तर निर्वाचन मिति तय नहुँदासम्म जुध्ने होकी भन्ने कुराले केही ढिलाइ भएको हो ।
निर्वाचन अघि नै परीक्षा सक्नेगरी मिति तय गरिएको हो ।’ बोर्डले विद्यार्थीलाई दुई महिना पढ्ने समय दिएर परीक्षाको समयतालिका सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
Previous बिहेपछि यौन चाहना हुन्न ? यस्तो रहेछ कारण र उपाय
Next फेब्रुअरीमा ५ ग्रहको संयोगले ५ राशिका जातकलाई बनाउँछ मालामाल !